Dhageyso:-Maamulka Gobolka Banaadir oo ka hadlay qarixii ka dhacay Muqdisho | SMC
Home WARARKA MAANTA Dhageyso:-Maamulka Gobolka Banaadir oo ka hadlay qarixii ka dhacay Muqdisho
Dhageyso:-Maamulka Gobolka Banaadir oo ka hadlay qarixii ka dhacay Muqdisho
Qaraxaan oo jugtiisa inta badan laga maqlay degmooyin ka tirsan Gobolkan Banaadir ayaa waxaa uu ka dhacay Wadada marta dhabarka dambe ee Barxada Iskaashatooyinka oo ku dhow Guriga Hooyooyinka ee degmada Xamarweyne.
Qaraxa ayaa waxaa la sheegay in Gaarigiisa loogu xiray Sarkaal ka tirsan Ciidanka Booliska Soomaaliyeed,isla markaana xilli uu marayay dhabarka dambe ee Iskaashatooyinka uu ku qarxay kuna dhintay qaraxaas.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan oo Goobta tegay ayaa sheegay in qaraxaasi ay ku geeriyoodeen Sarkaalka gaariga laha aoo lagu Magacaabi jiray C/Shakuur Xuseen Cabdi Dhicisow (Jaabiri) iyo qof kale oo la socday halka uu ku dhaawacmay askri ilaalo u ahaa.
Sidoo kale Afhayeenka waxaa uu ugu baaqay in qof walba uu ka taxadaro halka uu dhiganayo gaarigiisa si aan qarax loogu xirin,sidoo kalena Ciidamada Ammaanka Soomaaliya ay wadaan feejignaan amni oo ay uga hortagayaan weerarada Al-Shabaab.
Previous articleKoonfur Galbeed Soomaaliya oo sheegtay in ay furi doonaan wadooyinka xiran
Next articleDHAGEYSO:-Madaxweynaha Galmudug oo daahfuray dhismaha Golaha degaanka Cadaado